Bashiir Diiriye Shariif oo isku sharaxay hogaanka maamulka gobollada dhexe”Sawirro” – Radio Muqdisho
Bashiir Diiriye Shariif oo isku sharaxay hogaanka maamulka gobollada dhexe”Sawirro”
Bashiir Diiriye Shariif oo maanta kulan ka dhacay magaalada Muqdisho warbaahinta kula hadlay ayaa sheegay inuu u taaganyahay qabashada xilka madaxtinimada ee maamulka la doonayo in dhawaan laga hirgeliyo gobolada dhexe ee dalka gaar ahaan gobollada Mudug iyo Galguduud.
Ugu horeyn waxa uu tacsi u diray dadkii ku naf waayay dagaalada kasocda gobolka Galguduud isagoo ugu baaqay waxgaradka deegaanka in lasoo afjaro dagaalkaasi maadaama la doonayo dhawaan in deeganadaasi uu ka hanaqaado maamulka gobollada dhexe ee Soomaaliya.
Bashiir Diiriye Shariif ayaa sheegay inuu ka mid yahay shaqsiyaadka wax kaqabankara gobolada dhexe hadii loo doorto xilka madaxtinimada isagoo dhinaca kalena tilmaamay in hadii uu ku guuleytso isbedel muuqda laga dareemi doono gobollada Mudug iyo Galguduud gaar ahaan dhinacyada Amaanka,Caafimaad,iyo horumarinta deegaanka.
Sidoo kale Musharax Bashiir Diiriye Shariif ayaa ku amaanay dowladda federaalka Soomaaliya sida ay ugu heelan tahay in dalka lagu balaariyo nidaamka federaalka oo dadka Soomaaliyeed ay Dastuurka ku qorteen inaay qaataan kaasoo saldhig u noqon doona buu yiri in Soomaaliya markale cagheeda isku taagto.
Tan iyo markii la shaaciyay in maamul goboleed ay ku mideysanyihiin dadka kunool gobollada dhexe laga hirgelinayo Mudug iyo Galguduud ayaa waxaa soo badanaya musharaxiinta u taagan qabashada xilkaasi.